Ganacsiga ee Cilmi baarista Ereyga | Martech Zone
Arbacada, February 6, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Tani is Boosto La Isboonsariyay. Iyada oo qiimaha qiimeynta mashiinka raadinta uu aad u sarreeyo, la yaab ma leh in aaladaha cilmi baarista ay ku soo boodayaan meel kasta oo shabakadda ah. Waan adeegsadaa WordTracker barteyda, si fudud maxaa yeelay waxay leedahay qalab si fudud loo isticmaali karo oo loogu talagalay helitaanka sumadaha ugu fiican ee mid kasta oo ka mid ah qoraaladaada.
Waan ogahay in SEOmoz uu leeyahay eray aad u tiro yar iyo aaladaha weedhaha muhiimka ah ee ku jira arsenal of content premium, si fudud uma cadeyn karo kharashka $ 49 bishiiba ee ku jira boggeyga yar.
Wordze codsaday in aan ku sameeyo boostada blog-ka kafaala-qaadaya iyaga waxaanan xiiseynayay inaan wax badan ka barto warshaddan. Wordze waxay leedahay $ 45 bishii xirmo rukunka waxayna umuuqataa inay leedahay uruurinta ugu adag ee qalab waligey aan ku arkay ee ku saabsan Cilmi baarista Keyword:
Waa tan liiska astaamaha iyo aaladaha aad ka heli doontid Wordze:
Keyword Research Tool - kani waa mashiin aad ku soo gali karto ereyada iyo weedhaha wuuna la soo noqonayaa taariikh, tusmeyn, darajo, tirin, iyo waxyaabo kale Analytics aaladaha la xidhiidha weedha iyo weedho kale oo la mid ah.
Keen furayaasha ereyada - haddii aad tahay qof aqoon u leh ganacsiga, waxaad u badan tahay inaad ku guuleysatay cilmi baaris ku saabsan ereyada furaha hore. Wordze waxay kuu fududaysay inaad kumbuyuutarradeeda kale ku soo gasho nidaamkooda.
Natiijooyinka Download - is-sharaxaad.
keyword API - tani waa mid si aan caadi aheyn u xoogan API si loogu daro Wordze nidaamka maareynta maaddadaada ama arjigaaga. Runtii aad ayaan u xiiseystay tan - Waxaan jeclaan lahaa in aan arko qof dhexgalaya tifaftire oo ku daraya talooyinka keyword inta aad qoreyso.
Erayo-keyword-ka - Kani waa istiraatiijiyad inta badan la iska indhatiray Haddii aan ku calaamadeeyay barteyda 'blog technology technology'iyo'suuq teknoloji suuqgeyn'ama kaliya marketig iyo teknolojiyad intaa ka sii badan, waxaan qaban karaa qaar ka mid ah taraafikada waaweyn ee laga yaabo in goobaha kale ay iska indhatirayaan!
Cilmi-baarista Keyword-taariikheed ee taariikhda - waa muuqaal soo jiidasho leh oo ku saabsan isbeddellada ereyada muhiimka ah iyo weedhaha.
Baadhitaanka Mashiinka Raadinta - waa qalab weyn oo si qoto dheer loogu qodayo natiijooyinka mashiinka raadinta iyo helitaanka waxa bogagga kale loogu talagalay.
Mashruucyada - haddii aad cilmi-baaris ku sameyneyso mashaariic fara badan, codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku abaabusho ereyadaada muhiimka ah mashaariic si dhakhso leh loogu helo qalab kasta.
Hubinta Websaydhka - qalab aad u qabow oo aad ku xidhi karto URL bog ah isla markaana aad warbixin kaga heli karto dhammaan ereyada muhiimka ah iyo weedhaha, iyo sidoo kale awoodda aad ugu qoto dheer mid kasta si aad u hesho falanqayn dheeraad ah.
Thesaurus - Wordze sidoo kale waxay leedahay thesaurus adag halkaas oo aad ku keydin karto ereyga muhiimka ah isla markaana aad dib ugu soo ceshan karto ereyo dheeri ah oo dheeri ah si aad uga faa'iideysato, aad bay u fiicantahay haddii aad rabto inaad dhisto waxyaabo aad ufiican oo aad ku wadi karto Raadinta.
Hubinta WordRank - raadso cidda iska leh ereyada muhiimka ah ee aad isku dayeyso inaad wado.
Soo degsasho - awood u leh soo saarida dhammaan cilmi-baarista ereygaaga.
Su'aalaha La Weydiiyo - Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo - tani waxay u qalantaa culeyskeeda oo dahab ah, qaybtani waxay ka jawaabayaan su'aal kasta oo aad ka qabtid Cilmi-baarista Keyword.
Fiidiyowyada - ma jecla akhriska? Dadkani waxay xitaa ku daabaceen fiidiyoow dhammaan qalabkooda iyo sida si buuxda looga faa'iideysto!
Dabcan, Wordze waxay bixisaa barnaamij wadaag ah!
Aragtidayda khushuucsan, muuqaalka ugu cajiibka badan ee Wordze waa abaabulka aaladaha iyo sida ugu fudud ee loo heli karo loona isticmaali karo. Uma qurux badna sida qalabka kale qaarkood, laakiin uma baahna inay ahaato - kani waa erey baaris loogu talagalay wanaagga!
Maxay isticmaali kartaa Wordze? Dhammaan aaladuhu waa quruxsan yihiin - dhagsii, daabacaan, dhagsii, daabacaan. Waxaan runtii jeclaan lahaa inaan arko awoodda kala-soocidda shabakadaha iyo si firfircoon u abuuraya jaantusyada oo aan u shaandheeyo liisaska. Tusaale ahaan, haddii aan haysto eray fure ah oo bilaabmay 15-kii Maarso, waxaan jeclaan lahaa inaan sameeyo falanqeyn kahor-Maarso 15-keeda iyo 15-ka-Maarso dhammaan falanqeynteyda iyo jaantuskeyga.
Tags: mareegaha googlemavenlinkjaceylMaamulka mashruucanatiijooyinka warbaahinta bulshadamaaraynta hawshain la sameeyoliis-ku-dhigidtpiazzaliiska wunder
Helitaanka Daabacaaddu wali waa Cool!
Febraayo 6, 2008 saacadu markay tahay 11: 53 AM
Waxaan u isticmaali jiray Wordze hal shay ama mid kale ilaa 6 bilood hadda. Waxaan u arkaa inay aad u faa'iido badan tahay oo aan si kal iyo laab ah ugu raacsanahay soo jeedimahaaga sidoo kale.
Feb 6, 2008 markay ahayd 1:45 PM
Maxaad iigu oggolaan weyday inaad gasho sirtaan, Julie? 🙂
Feb 7, 2008 markay ahayd 9:21 PM
Faahfaahin wanaagsan boostadan. Kaliya waxaan wax ka baranayaa raadinta erayga muhiimka ah iyo SEO. Waxaa la isweydiinayay halka laga helayo qalabkan loo yaqaan 'Wordtracker', waana imisa? Mahadsanid.
Feb 7, 2008 markay ahayd 9:29 PM
Haye, sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa KeywordSpy baaritaankaaga ereyga muhiimka ah.